Baqattoonni Oromoo Liibiyaafi Tuuniiziyaa Gariin Biyya Sadaffaa Keessa Qubsiifamani – Welcome to bilisummaa
Waxabajjii 10, 2013 (Oromo Press) – Obbo Mardaasaa Addisuu baqattoota Oromoo biyyoota Kaaba Aafrikaa, Gaanfa Aafrikaafi Arabaa keessatti gargaaruudhaan muuxannoo waggaa baayyee nama qabu. Muuxanoo hojii namoomaa (humanitarian) isaarraa nuuf hira.
Dowwii kana keechatti, Obbo Mardaasaa Aaddisuu waliin rakkooleen baqattoota Oromoorra Kaabaafi Gaanfa Afrikaatti gahaa ture/jiru maal akka fakkaatan gadifageenyaan laalla. Keechumattuu, yeroo dhiyoo keecha Liibiyaafi Tuuniziyaa irraa baqatoota Oromoo haga tokko biyya sadaffaa keessa qubachiisuurratti milikii ykn bu’aa argame nuuf ibsa, Obbo Mardaasaan. Akkuma beekkamu oggaa sadi duraa eegalee sochiin farra-mootummoota abbaalee-irree Tuuniiziyaa, Liibiyaafi Masirii keessatti ta’uun isaa niyaadatama. Sochileefi wal-waraansonni sunneen ummatootuma biyyoota kanneenituu daran miidhe.
Baqattoonni Oromoos miidhaa sanarraa hinhafine. Dhimmoota isaan hinilaalle keeyisatti miidhamani. Baqattoonni Oromoo mormitoota, mootumoota akkasumas saboota biyya Kabaa Aafrikaatiin aleellaan gurgurddoon irra gahaa ture/jira. Baqattoonni Oromoo Oromummaa isaanitiin, biyya Tophiyaatii dhufan jedhamuudhaafi, gurraachumaa isaanitiin soqamanii rukutamaa as gahani.
–For full report click Oromo Press
Tags Baqattoota Kaaba Aafrikaa
Previous ‘No Nile, no Egypt’, Cairo warns over Ethiopia dam…
Next Oromo Refugees in Egypt staged amazing Demonstration of UNITY in front of UNHCR Cairo on 09/06/2013